လူသားအားလုံးအတွက်: ကျောင်းအုပ်ဆိုတဲ့ သတ္တ၀ါ လူမဆန်လိုက်တာ..
( သတင်း နဲ့ ဓာတ်ပုံ - မြတ်မိုး / ဧရာဝတီ )
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် အ.မ.က(၂၀) ကျောင်းအနီး ဘောလုံး လာရောက် ကစားသော
ကျောင်းသား တစ်ဦး ကြိုးတုပ်ရိုက်နှက်ပြီး ၄နာရီကျော်ကြာ ကျောင်းအတွင်း ချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရကြောင်း ကာယကံရှင် မိသားစုထံမှ သိရသည်။
အ.ထ.က(၁)သင်္ဃန်းကျွန်းတွင် သတ္တမတန်း တက်ရောက်နေသော အသက် ၁၂နှစ်အရွယ်
ပြည့်စုံကို အ.မ.က(၂၀)သင်္ဃန်းကျွန်းမှ ကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးဌေးလွင်
ရိုက်နှက် ချုပ်နှောင်မှုကြောင့် ကလေးငယ်သည် သင်္ဃန်းကျွန်း ဆေးရုံကြီးတွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေရကြောင်း ပြည်စုံ၏ အဒေါ်ဖြစ်သူက
'' ကလေးက အကြောက် လွန်သွားတယ်၊ ကလေးကို တွေ့တာ နောက်ထပ် တစ်နာရီနောက်ကျရင်
အသက်တောင် မီမှာ မဟုတ်ဘူး၊ ဒဏ်ရာကြီးကြီးမားမား မရဘူး၊ အကြောက် လွန်ပြီး
ဖျားနေတာ" ဟု သင်္ဃန်းကျွန်းဆေးရုံတွင် တာဝန်ကျ ဆရာဝန်တစ်ဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါ ကျောင်းအနီးတွင် ဇန်န၀ါရီ ၁၄ရက်နေ့ နံနံက် ၉နာရီတွင် ပြည်စုံသည်
သူငယ်ချင်းများနှင့် အတူ ဘောလုံး ကန်နေစဉ် ကျောင်းအုပ်ကြီး ထွ က်အော်မှုကြောင့် ကလေးငယ်များ အားလုံး ထွက်ပြေးခဲ့ပြီး ထိုထွက်ပြေးသွားသော ကလေးငယ်များထဲမှ ပြည့်စုံကို ကျောင်းအတွင်းသို့
ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးသည် လိမ်ညာခေါ်ဆောင်ပြီး ကျောင်းစောင့်နှစ်ဦးကို
လက်ပြန်ကြိုးတုပ်ခိုင်းပြီး ရိုက်နှက်ခိုင်းခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
'' ကျန်တဲ့ကလေးတွေက အိမ်ကို လာပြောပြောချင်း လိုက်သွားတာ၊ ကျောင်း အပေါ်ထပ်ရောက်တော့ လက်ပြန်ကြိုးတုပ်ခံထားပြီး ကြမ်းပြင်မှာ ခွေခွေလေးလဲနေတဲ့ မောင်လေးကို တွေ့လိုက်တော့ ကလေးက သတိမေ့နေပြီ" ဟု ပြည်စုံ၏ အစ်မအရင်းဖြစ်သူက ပြောသည်။
ကြိုးဖြည်ပေးပြီး အိမ်သို့ပြန်ခေါ်ရန် ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးကို အစ်မဖြစ်သူ ပြောရာတွင် ကျောင်းထဲသို့
အခွင့်မရှိ ၀င်ရောက်မှုဖြင့် တရားပြန်စွဲမည်ဖြစ်ကြောင်း အ.မ.က(၂၀)ကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးဌေးလွင်က ပြောဆိုလိုက်သည်။
''မောင်လေးကြောက်တယ် ကြောက်တယ်ပြောပြီး ရေပဲတောင်းနေတယ်၊ အဲဒီ ကျောင်းအုပ်ကြီးကလဲ မောင်လေးကို ပြန်မထည့်တော့ ကျွန်မထိုင် ရှိခိုးပြီး ပြန်ခေါ်လာရတယ်"ဟု အစ်မဖြစ်သူက ဆိုသည်။
ဤအမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး မိသားစုက သင်္ဃန်းကျွန်းရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်ထားပြီး
မြို့နယ်ပညာရေးမှူးများထံ တိုင်ကြားထားကြောင်း သိရသည်။
ပြည့်စုံသည် ကျောင်းအတွင်းသို့ ခိုးဝင်ခဲ့ပြီး ကျောင်းဝန်း အတွင်း ဗုံးလာထောင်မည် စိုးသဖြင့် ကျောင်းလုံခြုံရေးအရ ချူပ်နှောင်ရခြင်း ဖြစ်သော်လည်း ရိုက်နှက်ခြင်း မရှိကြောင်း ကျောင်းအုပ် ဦးဌေးလွင်က မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရှေ့တွင် ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်း ဖြစ်ပွားမှုနှင့် ပတ်သတ်ပြီး အ.မ.က(၂၀)ကျောင်းအုပ် ဦးဌေးလွင်ထံ ဆက်သွယ် မေးမြန်းရာ တွေ့ဆုံခွင့်မရရှိခဲ့ပါ။
'' ကလေးတွေကလဲ ကျောင်းထဲဝင်ဆော့တယ်၊ ဆရာကြီးက ဆုံးမတာပါ၊ ရိုက်နှက် ချုပ်နှောင်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး" အ.မ.က(၂၀)ကျောင်းမှ ဆရာမတစ်ဦးက ပြောသည်။
ကျောင်းအကျိုးဆောင်များက ပြည့်စုံမိသားစုထံ လာရောက် ညိုနိူင်းပေးပြီး ကလေးငယ်အတွက် မုန့်များ လာရောက်ပေးခဲ့ကြောင်း ပြည့်စုံ၏ အဒေါ်ဖြစ်သူက ဆိုသည်။
''ကျွန်မတို့ လျော်ကြေးလိုချင်လို့လဲ တိုင်ထားတာ မဟုတ်ဘူး၊ ကလေးတစ်ယောက်ကို ဒီလောက်ထိ လုပ်စရာမလိုပါဘူး" ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ကျောင်းသားကို တိရိစ္ဆာန်ကဲ့သို့ ကြိုးတုတ်ရိုက်
ကျမ မောင်လေးက အသက် ၁၂ နှစ်၊ အထက (၁) သင်္ကန်းကျွန်းမှာ သတ္တမတန်း တက်နေတာပါ။ ကျောင်းအုပ် ဆရာကြီးက အမက (၂၀) သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ် ကပါ။ သူ့ မူလတန်းကျောင်းဘေးမှ ဘောလုံးသွားကန်လို့ပါ။
နောက်တနေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာ အထက (၁) သင်္ကန်ကျွန်းမှ ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ မြို့ နယ်ပညာရေးမှူးကြီးနဲ့ 
Posted by မိုးယံ at 4:54 PM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
ကျောင်းအုပ်က စိတ်ပုံမှန်မဟုတ်ဘူး၊ အနာဂတ် သားကောင်းတွေအတွက် ရင်လေးစရာပဲ၊ ကလေးတွေရဲ့ စိတ်ထဲကို အဆိပ်အတောက်တွေ ထည့်ပေးနေမယ့် ပုံပဲ။
ခက်တော့တာပဲ..၁၂နှစ်သားကလေးကို ကျောင်းထဲ ဗုံးထောင်မှာစိုးလို့တဲ့..အတော်ရယ်ရတယ်.. အင်း..ပညာရေးပိုင်းလည်း သောက်သုံးမကျတဲ့သူတွေ ဆရာဖြစ်နေပါရော့လား..
ခက်တော့ခက်နေပါပြီ ဆရာကြီးရယ်.. ကျောင်းသား တစ်ယောက်ကို ကျောင်းအုပ် က အဲလိုက်ရိုက်ရတယ် လို့ဘယ်ပါချုပ်က သင်ပေးထားသလဲမသိဘူး =) ကျောင်းအုပ်တစ်ယောက်လုပ်နေပြီးတော့ ၁၂ နှစ်အရွယ် ဗုံးလာထောင်တာလား လာကစားတာလားဆိုတာကိုတောင် မဝေခွဲတတ်လောက်အောင်ကို ညံ့ဖျင်းနေပြီလား =) တော်တော် စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းတဲ့ ကျောင်းအုပ်ပါလား ဒီလို လူမျိုးကို ပညာရေးဌာန နဲ့ မပြီးနိုင်ဘူး ရဲစခန်းတိုင်တာ တောင် နည်းသေးတယ် ထောင်ပါတစ်ခါတည်းချပစ် အေးရော
ဆရာကိုလည်း စစ်ဆေးစေချင်ပါတယ်။ဆေးခြောက်တွေများသုံးနေလို့ ဂယောင်ခြောက်ခြား လုပ်နေတာလားဆိုတာ မသိနိုင်ပါဘူး။ ပြောချင်တာတွေလည်လျောက်ပြောနေတယ်။ သူ အလုပ်အပြုတ်မှာလည်း ဆိုးနေလောက်တယ်။ ပြုတ်လည်းပြုတ်သင့်ပါတယ်။ ဆရာ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လူတွေကို ခွဲခြားလုပ်ပြီး ဆက်ဆံတာ မကောင်းတဲ့ဆရာ တစ်ယောက်ပါ။ သာရင်ပေါင်းမယ်ဆိုတဲ့ ကျောင်းအုပ်တစ်ယောက်ဆိုတာ ထင်းရှားပါတယ်
ဟုတ်တော့ ဟုတ်နေပြီ။ လူ့ အခွင့်အရေးက မရှိ။ အမေရိကားမှာ ဆိုရင်တော့ ကိုယ်မွေးထားတဲ့ ကိုယ်သားသမီးကိုတောင် နဲနဲတောင် ရိုက်လို့ မရဘူး။ အခုလို မျိုးဆိုရင်တော့ သိပ်ကြည့်လို့ ကောင်းတဲ့ပွဲပါပဲ။ ဒီကျောင်းအုပ် ဘ၀ပါပျက်သွားမယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ဆရာဆိုတာ အာစရိယဂုဏ်နဲ့၊ ဘုရားနဲ့တစ်ဂိုဏ်းတည်းထားခဲ့ကြတာပါ။ အခုတော့ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ဒီလိုလုပ်ရတာလဲ။ ကလေးက ဗုံးထောင်မလား စဉ်းစဉ်းစားစားလည်းပြောပါဦးဗျာ။ ကလေးဘက်က တစ်ခုခုမှားတယ်ပဲ ထားပါဦး ဒီလိုဆုံးမဖို့မသင့်ဘူးလေ။ သူ့သားသမီးကိုဆိုရင် သူဒီလိုလုပ်မလား။ လုပ်မယ်ဆိုရင်တောင် သူများသားသမီးကို ဒီလိုမလုပ်သင့်ဘူးလေ။ ကလေးလေး သနားပါတယ်။ mental trauma တစ်ခုခု ရသွားမှာစိုးပါတယ်။
ဒီလိုကျောင်းအုပ်မျိုး နောက်ထပ် ရှိလာမယ်ဆိုရင်တော့ မမြင်ရတဲ့ မြန်မာပြည် အနာဂတ်မတွေးဝံ့စရာပါပဲ
ကျက်သရေမရှိတဲ့ ကောင်ကြီး... ကျောင်းအုပ်မလုပ်နဲ့ ကျောင်းသိက္ခာကျတယ်။ မင်းကိုပညာတွေသင်ပေးခဲ့တဲ့ မင်းမိဘတွေ မင်းဆရာတွေကို ငါသနားတယ်။ ကလေးတစ်ယောက်က ဗုံးထောင်တယ်လို့ထင်ရအောင် မင်းက သောက်မှန်းကန်းလန်းမသိအောင် ရူးနေလား။ ဟုတ်မှလည်းလုပ်ပါကွာ။ မင်းကိုယ်မင်းလည်းပြန်ကြည့်ပါဦး။ လူရောဟုတ်သေးလို့လားလို့။ ထောင်တွေဘာတွေချမနေနဲ့။ သတ်ပစ်ပလိုက် အဲလိုမိစ္ဆာမျိုးကို... တိုင်းပြည်ကျက်သရေယုတ်တယ်။
ဒီကျောင်းအုပ်ကို လူသိရှင်ကြား တစ်ခုခုတော့ အများသိအောင် ပညာပေးသင့်တယ် . . . သူလို လူကြောင့် မြန်မာပြည်ရဲ့ အနာဂတ် ရင်သွေးငယ်တွေ အရေး စိတ်လေးမိပါတယ် . .
အခုလိုစကားကို ကွေ့ ပတ်ရှောင်ကွင်းပြီး ပြောနေတာ သူ့ အပြစ်လွတ်အောင်လုပ်နေတာ သိသာလွန်းလှတယ် . . . ဒါမှ မဟုတ် ဒီကျောင်းအုပ်ကိုယ်တိုင်က ရူးနေတာလား . . .ဆိုက်ကို ဖြစ်နေတာထင်တယ် . . .
ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးလုပ်ပြီးတော့ စဉ်းစားဥာဏ်လေးတောင်မရှိတော့ဘူးလား ၁၂အရွယ်ကလေးကဗုံးလာထောင်မလား ဒီကလေးနေရာမှာ ဆရာကြီးရဲ့ကလေးဆိုရင်ရော အဲလိုပဲလုပ်မှာလား ဒီကိစ္စက UNICEF ကိုတောင်တိုင်လို့ရတယ် ဟိုပြောတဲ့ ဆရာမကလဲ သူမြင်တာကျနေတာပဲ ဆုံးမတာနဲ့ ကလေးကဆေးရုံတောင်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ ဟုတ်မှလဲလုပ်ကြအုံး ပိုက်ဆံတွေပေးရုံနဲ့ ဒီကိစ္စကပြေလည်ရင် ရဲတွေ ဥပဒေတွေဆိုတာ ဘာလုပ်ဖို့ထား ထားသေးလဲ အကုန်လုံးမီးရှိူ့ပစ်လိုက်ပါတော့လား ဒီလိုလူမျိူးကကျောင်းဆရာဖြစ်ဖို့မထိုက်တန်တဲ့သူပါ ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူပေးကြပါ။။။။။။
စေတနာ ၊ ၀ါသနာ ၊ အနစ်နာ အပြင် ဝေဒနာပါပေးတာကိုး
အခုဖတ်ရတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ အဲဒီကျောင်းအုပ်ကို စိတ်ရောဂါအထူးကုဆေးရုံပို့သင့်တယ်ထင်တယ်။ စိတ်မှန်ပုံမပေါ်ဘူး။ ယဉ်ယဉ်လေးရူးနေတာဖြစ်မယ်။ အဲဒါမျိုးက ပိုကြောက်ရတယ်။
ဆရာ ဆရာမတွေက ကျောင်းသားတွေကို ရိုက်ပြီး မဆုံးမရဘူးလို့ တားမြစ်ထားတယ်လေ........ သူကတော့ ရိုက်မှာပေါ့ ကျောင်းအုပ်ကြီးလေ..........ငှဲငှဲ (ကဲ လာကြ မူ လယ် ထက် ဆရာ/မ အကုန် ပြည်သူ့ နီတိ သင်တန်း မတက်မနေရ။ အမိန့် အရ ခင်ညွန့် ယခင် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသား ပညာရေးကော်မတီဥက္ကဌ ) စိုးရိမ်စိတ်များစွာဖြင့် (နောင်တတရားများမပါ) အလျှင်အမြန် ကြေငြာချက်ထုတ်လိုက်သည် (ငါ့မြေးကလေးတွေကို ရိုက်မှာစိုးလို့ )